Duulimaadkii ugu Horreeyey oo ka degay Garoonka cusub ee magaaladda Baraawe | Somali National Television - sntv.so
Home KOONFUR GALBEED Duulimaadkii ugu Horreeyey oo ka degay Garoonka cusub ee magaaladda Baraawe
Duulimaadkii ugu Horreeyey oo ka degay Garoonka cusub ee magaaladda Baraawe
Muqdisho (SNTV)- Wasiirka Wasaaradda Duulista hawada Dawlad goboleedka Koofur Galbeed Mudane Xasan Xuseen Maxamed ayaa maanta ka degay goroonka diyaaradaha degmadda Baraawe ee caasimada rasmiga ah ee Maamulkaasi.
Garoonka degmadda Baraawe oo dhismihiisa uu socday muddo Hal sano iyo Sideed bilood ah ayaa maanta waxaa si tijaabo ah uga degtay diyaarad Duulimaadyo toos ah ka bilowday Magaaladda Baraawe.
Wasiirka Wasaaradda Duulista hawada Dawlad goboleedka Koofur Galbeed ayaa markii uu ka degay goroonka degmadda Baraawe waxaa si diiran gudaha goroonka ugu soo dhaweeyey maamulka degmada Baraawe Saraakiisha Ciidanka iyo Bulshadda Deegaanka.
Maamulka degmadda Baraawe iyo dadka deegaanka oo la hadlay Warbaahinta ayaa muujiyey dareenkooda ku aadan goroonka loo dhisay, maadaama Baraawe intii ay jirtay garoon diyaaradeed aysan yeelan, kana uu yahay kii ugu horeeyey.
Previous articleSoomaaliya iyo Kenya oo isku raacay dib u howlgelinta danjirayaashooda
Next articleEng.Yarisow “Waa Fal Waxashnimo ah in Gabar Soomaaliyeed loo diido in ay ku Umusho Isbitaal”